Methyltrienolone ntụ ntụ (965-93-5) Ndị na-emepụta & Ndị na-eweta ya - actorylọ ọrụ
Methyltrienolone ntụ ntụ (965-93-5)
Methyltrienolone ntụ ntụ bụ otu n'ime steroid kasị mma maka ntiwapụ ahụ. Methly trenbolone bụ akwara n'elu kwalite ngwaahịa. Metribolone bụ otu n'ime ọgwụ ndị anabolic siri ike kasị emepụta.
Mwt Methyltrienolone Mpempe (965-93-5) video
Mwne Methyltrienolone (965-93-5) Nkọwa
Methyltrienolone uzuzu bu uzo anabolic-androgen steroid bu 17a-alkylated nandrolone (19-nortestosterone) mmeputara. A naghị ere ya dị ka ọgwụ ọgwụ ọgwụ na ihe mgbakwunye ihe oriri n'ihi ike ya na androgenic siri ike na ọrịa imeju. Otú ọ dị, a na-ejikarị ya dịka ebe edepụtara maka vitio biological ọmụmụ. Ọ nwere ike jikọta aka na androgen receptor ma nwee ike iji ya dị ka akara aka nke androgen receptor na prostate na ụbụrụ prostat.
Nnyocha e mere egosiwo na ịṅụ ọgwụ steroid nke anabolic na-eji nri nwere ike ibelata ikike bioavailability. A na - eme nke a site na mmiri ọgwụ nke hormones, nke nwere ike ikwe ka ụfọdụ ọgwụ kwụsị na abụba nri na-adịghị edozi, na-ebelata absorption ya na tract gastrointestinal. N'ihi na kacha tinye n'ọrụ, Raw Methyltrienolone ntụ ntụ kwesịrị iwere ke ukpọk afo.
Mwt Methyltrienolone Mpempe (965-93-5) Smmezi
Product Name Raw Methyltrienolone ntụ ntụ
Chemical Aha METRIBOLONE; Methyltrienone; 17A-METHYL-TRENBOLONE; Metribolone; Methyltrenbolone (Metribolone)
Brand Name Raw Methyltrienolone ntụ ntụ
Klaasị ọgwụ ọjọọ Steroid; Intermediates & Fine Chemicals; Ụlọ ọgwụ; trenbolone usoro
molekụla Fnhazi C19H24O2
molekụla Wasatọ 284.39
Nkịtị Monoisotopic 284.178 g / mol
Mgbu Point 170 Celsius
Esi Point 485.9 ± 45.0 Celsius C na 760 mmHg
Ọkara Ndụ nke Ndụ 4-6 awa
Agba odo odo na odo
Sume DMSO: ≥10mg / mL
Raw Methyltrienolone ntụ ntụ Antinye eji mee ihe dị ka isi okwu maka vitro biological maka ọmụmụ ihe ọmụmụ biochemical. O nwere ike jikọta aka na androgen receptor ma nwee ike iji ya dị ka akara aka nke androgen receptor na prostate na ụbụrụ prostat.
Kedu ihe bụ Mwne Methyltrienolone (965-93-5)?
Methyltrienolone bụ otu n'ime ọgwụ ndị anabolic siri ike nke mepụtara. Agụmakwụkwọ a bụ ihe mgbapụta nke trenbolone (trienolone), nke bụ c-17 alpha alkylated iji kwe ka nchịkwa ọnụ. Ngbanwe a emeela onye steroid nke dị ike karia nwa nwanne ya na-abụghị methylated. Ejiri ya na ebe ọ bụla site na 120-300 ugboro karịa nke nke methyltestosterone, nke nwere nkwarụ dị ukwuu n'etiti mmetụta anabolic na androgenic.535 536 Milligram maka milligram methyltrienolone bụ onye na-arụ ọrụ oyi karịa onye ọ bụla na-ere ahịa n'ahịa, dị ka .5-1 milligram kwa ụbọchị iji chọpụta mmetụta dị ike anabolic. Nanị ike ya dị na njedebe ya, nke na-ejighị ya mee ihe ugbu a na nke nnyocha nyocha.
Msyltrienolone uzuzu (965-93-5) na-arụ ọrụ
Methyltrienolone, mgbe a na-emepụta ya site n'ọrịa afo na-abanye na androgen receptors ma jikọta ya na ha. Androgens bụ isi hormonụ nwoke na-ebute na-akpata mmetụta anabolic. Rịba ama na ngwá ọrụ bụ isi nke na-enyere ndị homonụ aka ịmepụta mmetụta ndị a bụ anabolic bụ ndị na-anabata etrogen. Ha na-akpali ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-eduga n'inwekwuwanye na ike na ike.
Testosterone (otu n'ime ọtụtụ androgens) bụ hormone kachasị mkpa maka ọganihu na mmezi ahụ gị. Ndị na-anabata etrogen na-eme ka o doo anya na ahụ na-azaghachi na hormone a zoro ezo. Testosterone ejikọtara ya na ndị nabatara ya ma rute sel sel ahụ ọkpụkpụ ebe ọ na-arụ ọrụ ya.
Methyltrienolone, site n'ịnọgide na-ejide ndị na-anabata etrogen, na-enyere aka ịkwụsị mmetụta nke testosterone, si otú ahụ na-emepụta uru na ike na ike.
Msyltrienolone uzuzu (965-93-5) Ụdị
Ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị na-eji obere doses nke anabolic steroid. A na-ewere akụkụ dị irè kachasị dị n'etiti 0.5mg na 2mg. A ghaghị ịkpụzi dose ahụ n'ime akụkụ 3-4 na-ewere otu dose banyere 1.5 awa tupu ntụrụndụ. Dịka e kwuru na mbụ, methyltrienolone bụ ọgwụ siri ike ma na-atụgharị na ya nwere ike imebi ahụ ike gị. Ya mere, dochie ala gị na obere oge gị. Oge nhazi nke methyltrienolone okirikiri bụ izu 6-8. Otú ọ dị, maka ndị na-amalite, a na-adụ ọdụ ka oge ndụ ahụ dị mkpirikpi karịa 4 izu ma ọ bụ ọbụna obere.
Nnyocha na-egosi na ịṅụ nri methyltrienolone nwere ike belata bioavailability ntụgharị ya nwere ike belata ntinye nke nri na ahụ gị. Nri na-eri nri na-adịghị mma nke sitere na belata bioavailability ga-egbochi mmetụta anabolic nke steroid a. Ya mere, iji nweta uru kachasị, anyị ga-enye ndụmọdụ ka ị were ya na afo efu.
Mwt Methyltrienolone Mpempe (965-93-5) Na-eji
Methyltrienolone bụ otu n'ime ọgwụ ndị anabolic kachasị ike nwere ọtụtụ uru. Nke a bụ ndepụta nke uru dị ukwuu ị ga-enweta mgbe ị na-agba ịnyịnya na ọgwụ a:
(1) Ọ dịghị aromataze. Nke a pụtara na ọ dịghị atụba n'ime estrogen. Rịba ama na estrogen bụ hormone nke na-etolite ara, ma na-achịkwa ịmalite ịhụ nwa nwoke na ọmụmụ nwa n'afọ. Ammoni ndị dị otú a na-eme ka ọ ghọọ estrogen nwere ike iduga gị na gynecomastia nke bu oke aka na mmadu. Ọzọkwa, nnukwu estrogen dị elu n'ime ahụ nwere ike ịkpata ọrịa obi na cancer cancer. Ma ọ dịghị mkpa ka ị na-echegbu onwe gị n'ihi na mgbe ị na-agba ọsọ na ọgwụ a ị na-enwe nchebe pụọ na nke a niile ka ọ ghara ịbanye n'ime estrogen.
(2) Dika ọ na-adọtaghị n'ime estrogen, ọ na-eme ka onye ọrụ ahụ ghara ịdị na-ejide mmiri site na iwepu mmiri na-achọghị. Ya mere, ị nwere ike iji ya n'oge nri ma ọ bụ mgbe ị na-akwadebe maka asọmpi.
(3) Ọ na-eme ka ọ dịkwuo ike. Nke a bụ ihe ọ bụghị ndị na-arịa ọrịa anabolic nwere ike ime. Ọtụtụ ndị na-ahụ maka steroid na-egosi mmụba dị ịrịba ama nke uru uru ahụ ma ọ bụ naanị ole na ole na-eduga na ike siri ike na ya. Methyltrienolone bụ otu steroid nke na-eme ka ike ịkpụ ahụ nwee ike ịme ka ahụ gị dị ike.
(4) Ị ga - enwe mmụba dị ukwuu na ike ka ị na - agba ụkwụ na steroid. Ọ ga-enyere gị aka n'oge mmemme gị site na ịbawanye ume na ike gị. N'ihi ya, ị ga-enwe ike ịzụlite ogologo oge na mgbe mgbe.
(5) Ọ na-eme ka ọtụtụ mmadụ gbasaa. N'ịbụ onye na-eme egwuregwu ma ọ bụ onye na-eme egwuregwu, ị ga-achọ ka a na-ahụ anya nke ọma, nke a na-ahụ anya iji nye gị ahụ ike.
(6) Ọ dị nnọọ ike, a pụkwara iji ya tụnyere nchịkọta nke 2 gaa na 3 siri ike steroid na-agba ume n'otu oge. Ya mere, ọbụna nchịkọta ya n'ime obere doses na-eduga ná mmụba dị ịrịba ama na oke ahụ ike na ike.
Ịzụta Methyltrienolone ntụ ntụ si Buyaas.com
1 nyochaa maka Methyltrienolone ntụ ntụ (965-93-5)
Ngwaahịa METHYLTRIENOLONE bara ezigbo uru.
Raw Trenbolone Enanthate ntụ ntụ (10161-35-8)
Azu uzo Trenbolone Acetate (10161-34-9)
Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) ntụ ntụ (23454-33-3)
Ụkọ Trenbolone Raw (10161-33-8)